mubvunzo Douglas A_20 Havoc
1 gore 3 ago #809 by frederi350
Ndakatora Douglas A_20 Havoc mushure mekubvisa zvese zvemakombiyuta ekuchengeteka kwangu (Norton uye User Account Control). Kubudiswa uye Kuiswa uko kubudirira. Mushure mekutora FSX ndakanga ndisingakwanisi kuwana Havoc muIndaneti Yokusarudza Window. Ndiri kushandisa FSX Booster 2013-Version 2.9 kutanga FSX uye ini zvakare ndakaedza kutanga FSX ndisingaiti Booster 2013. Ndakaedza zvakare kudzorerazve. Zvadaro ndakaedza kuwedzera zvakare FSX Flight Simulator Deluxe Edition kubva kuDVD Disk kushandisa sangano reMaintenance. Ndine FSX inotakura paD yangu: data disk kwete C: nzvimbo disk in Program Files (x86) / Microsoft Games. Ndakaedza zvakare kudzorera nguva dzinoverengeka uchishandisa Automatic Installation uye Custom Installation. Hapana chandinoita chinenge chichida kuunza Douglas A_20 Havoc Mundiro yeSarudzo Yokusarudza.
Isai Memory (RAM): 16.0 GB (15.9 Usable)
Type System: 64 -bit Operating System, x64-based Processor
Ratidza Machechi: NVIDIA GeForce GTX 970 uye Intel (R) Graphics 4600
Time chokusika peji: 0.221 mumasekonzi